गरिब परिबारमा जन्म लिएका तारा बिक को कसरी भयो यो अवस्था। हेर्नुहोस भिडियो – Khabarbot
बाग्लुङ जिल्लामा जन्म लिएका तारा बिक को यो अवस्था देख्दा सबैका आँखा रसाउने गर्छ्न भर्खर को लाउ लाउ खाउ खाउ भन्ने यो उमेरमा तारा भने हिनडुल गर्न समेत गर्न सक्दैनन।। केही समय अघि उहाँको उपचारको लागि एक जना दिदी ले उहाँलाई काठमाडौं लिएर नि जानू भयो तर उपचार सम्भब नभएपछी उनी निरास हुँदै घर फर्किनु पर्यो।।। उहाँको स्यार सुसार आमाले गर्दै आउनु भएको छ उहाँको बुबाले भन्नू हुन्छ बाहिर कतै गएपनी यसैको याद आउँछ।। तारालाइ सोध्दा भन्छ्न मलाइ अझै उपचार सम्भब हुन्छ कि भन्ने आशा छ आउनुहोस् तपाई हामी सबै मिलेर सके सहयोग नसके सेयर गरेर भए पनि तारालाइ नयाँ जीवन दिने प्रयत्न गरौं ।।। भिडियो अन्तिममा छ कृपया पूरा हेर्नुहोला।।
यो पनि पढ्नुहोस।। १० करोड बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री लिएर देश दौडाहा मा निस्केका कलाकार तिलक बस्नेत , अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाही र शान्त शर्माको टिम माथी शुक्रवार मध्यरातमा निर्घात कुटपिट भएको कुरा सामाजिक संजाल मार्फत कलाकार तिलक बस्नेतले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उनले लेखेका छन : “समय रातिको १० बजे करे खोलामा कुटपिट भयो, म लगायत मेरो गाडीमा भएका अभियान्ता बाच्न सफल भयौ
तर ग्यानेन्द्र साही बसेको गाडि तोडफोड र आकर्मण भयो भग्वान बचाइदेउ ।”
विस्तृत विवरण आउन बाकी… कतिपयले शाहीको अबस्था गम्भीर भएको अड्कल काटेका छन तर शाहीको फेसबुकमा कुनै पोस्ट आएको छैन आखिर कहा बाट यस्तो राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई आक्रमण भईरहेको छ? चितवनमा हेमराज थापामाथी आक्रमण सुर्खेतमा शाहीमाथी। हेमराज थापा सुर्खेत जादै गरेको जानकारी फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन। उहाँ हरूलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गरौ राम्रो काम गर्नेलाई सहयोग गरौ सबैले धन्यबाद
सन्तोष देउजाको घरमा के हुँदैछ र यस्तो ? पत्नि देवर र आमाबिचको कुराकानी बाहिर आयो, सबैको घर मिलाउँदै हिँड्ने सन्तोष्कहाँ के हुँदैछ ? हेर्नुहोस् भिडियो